ओली-दाहाल भेटवार्ता सकियो, एकताबारे प्रारम्भिक सहमति ! - Samudrapari.com
ओली-दाहाल भेटवार्ता सकियो, एकताबारे प्रारम्भिक सहमति !
भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक
काठमाडौं – पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा अन्तिम सहमति जुटाउन बसेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज भएको वार्ता सकिएको छ ।
ललितपुरको मानभवनस्थित निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा दुई नेताबीच वार्ता भएको हो । दुई नेताबीचको वार्तामा भोलि २ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने र पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय भएको उच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ । एकता संयोजन समितिको बैठकले सांगठनिक तथा सैद्धान्तिक विषय मिलाउन दुई वटा कार्यदल गठन गर्नेछ।
यसअघि दुई नेताबीच भएको वार्तामा एकीकृत पार्टीको नेतृत्वको विषयमा सहमति जुटेको थियो । एकता र शक्ति बाँडफाँडवारे ओली र दाहालले हिजो ‘प्रारम्भिक सहमति’ गरेको बताएका थिए । आजको बैठक पार्टीका अन्य नेताहरुको व्यवस्थापन र सैद्धान्तिक विषय मिलाउनमा केन्द्रित थियो ।